लुम्बिनीका अस्पताल भरिए, वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग | Suddhodhan Online Portal
Home प्रदेश समाचार लुम्बिनीका अस्पताल भरिए, वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग
लुम्बिनीका अस्पताल भरिए, वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग
१५ बैशाख, दाङ –
कोरोना सङ्क्रमित बढेसँगै लुम्बिनी प्रदेशका कोरोना विशेष अस्पतालहरु भरिएका छन् । बेड भरिएसँगै अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकले वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गरेका हुन् ।
लुम्बिनीका दाङ, बाँके, रुपन्देही र बर्दियामा दिनहुँ काेराेनाकाे जटिल प्रकृतिका सङ्क्रमित थपिने क्रम बढ्दाे छ । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोद गिरीका अनुसार प्रदेशमा अहिले भेन्टिलेटरमा २१, आईसीयूमा एक सय ८१, आइसोलेशनमा सात सय ७४ जनाको उपचार भइरहेको छ ।
धेरै बिरामी यहाँ आईसीयू बेड कुरेर बसेका छन् । स्वास्थ्य निर्देशनालयकाे तथ्याङ्कअनुसार सङ्क्रमितमध्ये ५ हजार ५ सय ७४ जना होम आइसोलेशनमै बसेका छन् । लुम्बिनीमा अहिलेसम्म सङ्क्रमणबाट ४ सय ९२ जनाको ज्यान गएको निर्देशक डा. गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच जिल्ला कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र प्युठानले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सर्वसाधारणलाई स्वर्गद्वारी दर्शनमा रोक लगाएको छ । कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिन यस्ताे निर्णय गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।
Previous articleसहयोग र भाईचाराका साथ रोजा बस्दै रमजान पर्व मनाउन राष्ट्रीय मदरसा संघको आग्रह
Next articleभारतको असाममा ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्प